Odayaasha iyo waxgardka beesha Gaaljecel ee gobolka Gubbada Hoose oo sheegay in aysa taageersaneyn maamulka uu madaxweyne Cabdullahi Yuusuf u magacaabay Kismaayo iyo Dahir Ammin Jeesow oo ku tilmaamay maamulka laga sameeyay gobolka Hiiraan mid aan laga fiirsan. Ruunkinet 14/02/07
Odayaasha yo waxgaradka beesha Gaaljecel ee gobolka Jubbada Hooose ayaa ku tilmaamay waxba kama jiraan maamulka dhawaan uu madaxweyne Cabdullahi Yuusuf u magacaabay gobollada Jubbooyinka.
Odayaashan oo soo gaarsiiyay qoraal liddi ku ah maamulkaasi ayaa sheegay in aysan macquul ahayn in ay sameeystaan maamul dad marti ah oo xoog ku jooga gobolka Jubbada Hoose.
Waxgaradkan ayaa qoraalkooda raaciyay in uu madaxweyne Cabdullahi Yuusuf doonayo in riyadiisii ahayd in reer Puntland ay ka taliyaan gobolka Jubbada Hoose ay u rumowday kadib markii uu dalka keenay ciidama Itoobiyaan ah.
Dhanka kale, Daahir Aamin Jeesow oo ah afhayeenka Beesha Gaaljecel ee UK ayaa ku tilmaamay maamulka gobolka Hiiraan mid aan loo dhameyn.
Mudane Jeesow oo u waramayay shabakadda Ruunkinet ayaa sheegay beelaha deggan gobolka Hiiraan qaarkood ay moodayaan in ay si gooni ah u leeyhiin gobolkaasi ayna ka yeeli karaan sida ay doonaan.
Daahir Aamin Jeesow ayaa sheegay in uusan taageersaneyn maamulka ay dowladda u magacawday gobolka Hiiraan oo u muuqda in beel gaar ah loogu daneynayo.
Mudane Dahir ayaa warkiisa raaciyay in Hiiraan ay deggan yihiin beello badan looba baahan yahay in ay is xaq dhowraan kana tashadaan aayahooda balse ay shaqsiyaadka qaarkood u arkayaan haddii ay dowladda ku dhawaadaan in ay wax waliba u suurta galayaan.
"Maanta cid kasta wey ogtahay wax jira iyo siyaasadda Soomaaliya suurta galna ma aha in la qaldo dad soo jeeda oo arkaya waxa dhacaya", ayuu yiri Daahir Aaamin.